Led Street Light Manufacturers - China Led Street Light Factory & Suppliers
Led Garden Chiedza
Makore mashanu Warranty Kufa Kukanda Aluminium 40W Garden Lam...
Mazuvano Isingapindi Mvura Mumugwagwa Chiedza, Aluminium SMD 150W LE...
Yakakwirira Simba Mvura Yekunze Smd IP66 60w 100w 120w...
Kunze Led Street Rambi Led Isina Mvura IP66 Street Chiedza Smart Pole Lighting Chiedza
【PATENT PRODUCTS】Ichi mwenje wemugwagwa unotungamira ndicho chigadzirwa chedu chine patent, chinotengeswa zvakanaka kunyanya mumusika wekuEurope.Uye isu tine CE/CB/ENEC chitupa.
【ZVINHU ZVINHU ZVAKANAKA】Shandisa yemhando yepamusoro die-casting aluminum-ADC12.Ipa vimbiso yemhando ye les street light housing.Shandisa 4/5mm yakadzikama girazi kugadzira mwero wekudzivirira weiyo gadziriso kusvika IKO9 Kirasi.
【ZVINYORE KUSHANDA】Rudzi rwechiedza chemumugwagwa chiri nyore kuvhura.Vanhu vanogona kuivhura vasina chero midziyo.Iyo yakakwirira yebuckle inovimbisa kuti mwenje unogona kuvhurwa nyore.
【KUSHANDA KWAKURU】Tinogona kushandisayakanyanya kushanda zvakanaka LED 3030/5050 machipisi, ingangoita lumen yayo inogona kusvika 130lm/w.
【KUDZORA CHIEDZA】Chiedza chemugwagwainogona kugadzirisa nekudzora mwenje, otomatiki kudzora kwechiedza (kuvheneka panguva yemanheru, kudzima uye kutanga kuchaja mambakwedza)
【IP66 CHISIRO CHEMVURA】Magetsi emumugwagwa ane IP66 yehumbowo hwemvura uye mheni, ichiigonesa kutsungirira kwakasiyana siyana kwekunze nharaunda nemamiriro ekunze.Kushanda tembiricha: -35 ℃-50 ℃.
Nyowani dhizaini Mugwagwa weProjekiti Mwenje Led Street Chiedza Kunze
Luminaire inowanikwa kubva ku20-120W.Imhando yehupfumi.
Yakanakisa kupisa mwaranzi, kugona uye kugona kwemagetsi.
Die-cast aruminiyamu muviri une hupfu-kunamira uye anti-corrosion kurapwa.
Diffus with 4.00/5.00mm super white toughened glass.
IP66, IK09, 3 gore kana 5 gore kana 7 gore garandi.
Shandisa hukuru hwepamusoro uye hupenyu hurefu hunovhenekera.
Madhiraivha ane mukurumbira pasi rose anowanikwa.
Inogadziriswa spigot kubva 0-90 °.
Kunze Indasitiri Factory Led Gadheni Mwenje Aluminium Housing IP66 50w Led Street Chiedza
【YAPEDZA WATTAGE】Maraiti emumugwagwavane saizi ina, iyo inowanikwa kubva pa60W kusvika 400W.Inogona kusangana zvakasiyana-siyana zveprojekiti zvinodiwa.Yakanakira nzvimbo dzekuvhenekesa, nzvimbo dzekupaka, zvivakwa uye zvakare kune zvakajairika mwenje wekunze.
Yakakwira Simba Mvura Yekunze Smd IP66 60w 100w 120w 150w 240w Led Street Chiedza
Luminaire inowanikwa kubva ku30-150W.Ndiyo nzira itsva yekambani yedu.
Iine nzira nhatu dzekuisa, tsigiro yekushandisa SMD kana LED module.
Patent zvigadzirwa zvine CE/CB zvitupa.
Kunze Mvura Yekunze IP66 SMD LED Street Chiedza
Yakakwirira Simba Aluminium Mvura Isingapindi IP66 Kunze 60w 90w 120w Led Street Ligh
Ruzhinji Rwemwenje Mwenje 150W LED Street Chiedza
Luminaire inowanikwa kubva ku20-240W.Imhando yehupfumi, iyo yakagadzirirwa kunyanya kumusika weBrazil.
Chitarisiko chakanaka, mutengo wemakwikwi ngaurege kufarirwa nevatengi
Die Cast Aluminium Outdoor Led Street Lighting
1.Luminaire inowanikwa kubva ku30-120W.Imhando yehupfumi, iyo yakagadzirirwa kunyanya kumusika weBrazil.Musiyano uripo pakati payo neBTLED-2001 ndewekuti spigot inogadziriswa kana kwete.
2.Kutaridzika kwakanaka, mutengo wemakwikwi ngaurege kufarirwa nevatengi
3.Excellent kupisa mwaranzi, optical uye magetsi kugona.
4.Die-cast aluminium body ine powder-coating uye anti-corrosion treatment.
5.Diffuse ne 4.00 / 5.00mm super white toughened girazi.
6.Tinopa 3 gore kana 5 gore kana 7 gore waranti.
7.Shandisa hukuru hwepamusoro uye hupenyu hurefu lumileds.8.Internationally mukurumbira brand drivers varipo.
Led Street Chiedza-(Volvo & Iphone & Bolivia & Chile & Aec)
【KUITA ZVINYORE】 Zviri nyore kuvhura mhango yemagetsi.Unongoda chete kuvhura clip, hapana chaunoda maturusi.
【KUDZORA CHIEDZA】Chiedza chemugwagwainogona kugadzirisa nekudzora mwenje, otomatiki kudzora kwechiedza (kuvheneka pamasikati, kudzima uye kutanga kuchaja mambakwedza).
【Split design】Iyo magetsi ekupa mhango uye iyo LED sosi mhango yakaparadzaniswa, yakapatsanurwa dhizaini ine nani kupisa kupisa.
220 Volts Ane Lens Smd Ip66 Mvura Isingapindi Panze Led Street Chiedza
Led Street Light- (oppo & Korea Star & Plus & Moto)
oppo: Chiedza chemugwagwa chinowanikwa kubva ku60-300W.Iro dhizaini nyowani ine LED module.Iyo max ye5pcs modules.Inogona kushandiswa zvakare semafashama emwenje.
Korea Star: Luminaire inowanikwa kubva ku40-180W.Yakagadzirirwa kunyanya kumusika weBrazil.Iyo ine LED module.Iyo yakakura ye6pcs LG modules.
More: Luminaire inowanikwa kubva ku60-350W.Inogamuchirwa pakati peSoutheast musika.Iyo ine LED module.Iyo max ye6pcs modules.
Mudhudhudhu: Chiedza chemugwagwa chinowanikwa kubva ku60-300W.Iyo dhizaini nyowani ine LED module.Iyo max ye5pcs modules.
Chitarisiko chakanaka, ngachifadzwe nevatengi.
Isu tinopa 3 gore kana 5 gore kana 7 gore waranti.
Spigot inochinjika 0°/90°
Yakakurumbira maitiro Aluminium Kunze Led Street Chiedza
Luminaire inowanikwa kubva ku30-120W.Iyo yakasarudzika modhi.Inogona kushandiswa sechiedza chemugwagwa, chiedza chemvura uye mwenje wenzira.
Kunyangwe iwe uri wekutanga-up unoda chibikiro chitsva chakazara kana chimedu chaicho chemidziyo yekubikisa… ABE
Iyo 130th Canton Fair ichavhura pa15 ...
Welcom kuna 2021 Guangzhou International Li...
Kero: NO.39, Danjin road, Baita industrial park, Jincheng town, Jintan district, Changzhou city, Jiangsu province, China Mainland